Kubandakanya izithombe ze-Instagram ezandisiwe Ukubandakanya i-imeyili 7x | Martech Zone
NgoMsombuluko, Okthoba 19, 2015 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
In Isimo Sokuhweba Okubukwayo, isifundo esenziwa ngu Curalate futhi Inhlangano Yezentengiso ye-Inthanethi, Bangu-8% kuphela abathengisi abakholelwa ngokuqinile ukuthi basebenzisa kahle izithombe ukushayela ukubandakanyeka kwe-imeyili.
Ama-imeyili angama-76% afaka izinkinobho zokuxhumana kepha ama-imeyili angama-14% kuphela afaka izithombe zomphakathi.
Isithembiso sokuqala semithombo yezokuxhumana kwakuyikhono lemikhiqizo yokwakha ubudlelwano obuhle kakhulu namakhasimende abo. Lokhu kwenza izinkampani zingeneke futhi zithembeke. Hlanganisa lelo qiniso ngokukhula okuqhumayo kwezithombe ezinkundleni zokuxhumana, futhi akumangazi ukuthi ukuhlanganisa imithombo yezokuxhumana nezithombe kunamandla. Faka lokhu ukuphusha imiyalezo kumakhasimende akho, futhi ungahle ube kokuthize!
Uma ubheka imikhiqizo eqale ukusebenzisa izithombe ze-Instagram ngaphakathi kwama-imeyili, izinzuzo zicacile. Isibonelo, omunye umthengisi wezempilo, uhambise i-7X lift ngokuzibandakanya nezithombe zomkhiqizo kuwebhusayithi yabo emahoreni angama-24 ngemuva kokuthumela i-imeyili yabo yokuqala efakwe ku-Instagram.
Curalate futhi Iyinki Ehambayo udale i-infographic elandelayo, I-Instagram + I-imeyili: Uthando Lwanamuhla.
Tags: i-curalateimeyili nezenhlaloi-imeyili kanye nemithombo yezokuxhumanainstagrami-instagram infographicinhlangano yezentengiso ye-inthanethiuyinki ohambayoezenhlalo kanye ne-imeyilizokuxhumana kanye imeyiliukuhweba okubukwayo
Izinto ezibalulekile eziyi-10 Zokukhiqiza Okuqukethwe Okusebenzayo